Global Voices teny Malagasy » Vehivavy Ejiptiana iray novonoina tao amin’ny fitsarana Alemà noho ny fanaovam-boaly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Oktobra 2018 12:13 GMT 1	 · Mpanoratra Eman AbdElRahman Nandika (fr) i Audrey Lambert, Liva Andriamanantena
Sokajy: Alemaina, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
(Marihina fa tamin'ny 6 Jolay 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Efa ela izay ireo bilaogera Ejipsiana no tsy niara-niombon-kevitra. Saingy ilay heloka feno fankahalana  niseho farany tany Alemaina momba ilay vehivavy Ejipsiana Miozolomana iray, Marwa El Sherbini, no nahafahan’izy ireo nihaona indray sy nanameloka ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena, izay ninia tsy nijery ny toe-javatra niseho tamin’ireo Miozolomana any Andrefana.
Tamin’ny volana Aogositra 2008 no niseho ny tantara, rehefa notorian'i Marwa tao amin’ny fitsarana noho ny fanalambaraka ilay namono azy, Axel, ilay lehilahy Alemà tsy an’asa iray izay 28 taona taorian’ny nandraisany azy ho « mpampihorohoro » satria nitafy hijab ( voaly islamika) izy.
Saingy ny Alarobia 1 Jolay 2009, nanindron’antsy azy in-18 i Axel tao anatin’ny trano fitsarana Alemaina taorian’ny nanambaran’ny mpitsara fa nandresy tamin’ny fitsarana i Marwa ary tsy maintsy handoa onitra 2800 euros aminy i Axel noho ny faniratsirana nataony taminy.
Vehivavy Ejipsiana 32 taona i Marwa, vadin’ny Ejipsiana iray mpianatry ny oniversite nahazo vatsim-pianarana tany Alemaina. Naratra ihany koa ny vadiny tamin’io zava-nitranga io ary niady tamin’ny fahafatesana izy rehefa nentina teny amin’ny hopitaly tamin’io fotoana io.
Nanazava sy nanambara ny hatezerany tao amin’ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe : « Ary raha vehivavy miaraka amin’ny vehivavy izy  » i Zeinobia :
Marwa El-Sherbini, ilay vehivavy 32 taona dia bevohoka ny zanany faharoa tamin’izy voatsatok’antsy[…]. Tena heloka bevava maneho fankahalana mihitsy izany, fa ny maha-samihafa azy amin’ireo heloka fankahalana hafa toy ireo heloka amin’ny firaisan’ny lahy sy lahy na vavy sy vavy na ireo heloka amin’ny fankahalana ny Jiosy dia tsy navoaka tamin’ireo gazety tany ivelany izy, ary tsy fantatro ny antony !! Heloka bevava fanavakavaham-bolonkoditra izany. Voatsindron’antsy fotsiny ny vehivavy iray tao amin’ny fitsarana, kiii, tsy zava-dehibe loatra izay tsy araka ny tokony ho izy ny fitantarana ny zava-nitranga ho an’ireo fampalalam-baovao!! Renim-pianakaviana bevohoka izy, Andriamanitra ô ! Hotahian’ i Allah izy. Maritioran’ny fanavakavaham-bolokoditra sy ny fankahalana ihany koa izy.
Nanontany tena tao amin’ny Twitter i Ahmed Esmat: Tsy nitantara ny famonoana an’i Dr Mrwa Ejipsiana tany Alemaina ny fampahalalam-baovao Eoropeana, izany no zava-nisy. Andao horesahina ny fampitoviana lenta.
Nahitana akony avy amin’i Hisham Maged  ity fanehoan-kevitra ity izay naminavina tao amin’ny bilaoginy ny zava-niseho.
Andao hilalao ny kilalaon’ny vinavina isika, alaivo sary an-tsaina raha navadika ilay toe-draharaha ary andeha hatao hoe Tandrefana ilay niharam-boina voatsatok’antsy na aiza na aiza misy azy eto amin’izao tontolo izao – Andriamanitrô ! na avy amin’ny firenena any Afovoany-Atsinanana nataon’ireo Miozolomana mahery fihetsika na koa ireo antsoin’ireo fampitam-baovao ho « vitsy an’isa » any Ejipta ! Azo antoka fa efa rentsika niresaka izany izao tontolo izao na ny aterineto!
Nanaraka akaiky ny toe-draharaha i Bikya Masr ary nanontany tena raha afaka natao mariky ny fihaonana indray i Marwa.  Nitaky hetsika ara-diplaomatika sy nasionaly tsy misy hatak’andro izy :
Tezitra ry zareo ao Afovoany-Atsinanana. Nefa izany hatezerana izany akory tsy afaka naseho tamin’ny alàlan’ny tabataba kisendrasendra hamelezana ireo Alemà na i Alemaina. Tsy maintsy hazonina ny endri-pirindrana mba hahomby avokoa ireo fanentanana atao. Ary izany no hitranga raha tena olomanga afa-mampiray ny olona tahaka izay nataon'i Neda tany Iran tokoa Ramatoa Sherbini.[…]
Mihevitra ve ny olona fa olomanga Ramatoa Sherbini? […] Tokony hitroatra ireo vahoaka Ejipsiana fa nisy vehivavy iray novonoina noho izy nanao voaly ary alohan’izany rehetra izany, Ejipsiana izy. Tokony hiteny hentitra an’i Eoropa ny governemanta fa tsy azo ekena io fihetsika io, kanefa nangina izy ireo. Tsy nisy azon’ireo vahoaka Ejipsiana natao afa-tsy ny manao hetsika sisa.[…]
Andeha isika ho eo anoloan’ny Masoivohon’i Alemaina ary hotakiantsika ny hanaovana fanadihadina sy tatitra feno. Satria raha tsy afaka manao izany i Alemaina dia manaporofo indray izany fa mankahala Miozolomana ireo Eoropeana ary matanjaka kokoa noho ireo lazaina fa « fahafahana » ireo Arabo. Eny, marika i Marwa, saingy tokony ho marika natokana ho amin’ny fampivondronana olona izy fa tsy fampisarahana azy ireo.
Nanoratra  i Sadafat, bilaogera iray hafa hoe :
Raha nisy Jiosy naratra tany Alemaina, na dia avy amin’ny teny na vazivazy fotsiny ihany aza, nanao izay azony natao ny Praiminisitra ary niantso ny Fox News sy ny Sky News mba hiarovana ny Jodaisma ary nanangan’ady tamin’ireo mpankahala Jiosy. Saingy tsy nisy nitomany ny fahafatesan’ity vehivavy Ejipsiana ity tany an-toerana.
Tokony ho fantarin’ny governemanta Alemà fa mahatratra ireo Miozolomana ity fihetsika ity ary tokony hosoratan’izy ireo ao amin’ny lalam-panorenany fa ireo Miozolomana, izay fivavahana faharoa eo amin’ny fireneny, dia tokony arovana amin’ny fankahalana ny Islamo.
Nanao fanehoan-kevitra sy namoaka ny hatezerany tao amin’ny Twitter ireo bilaogera Ejipsiana.
Ho an’ny mpanoratra ity lahatsoratra ity kosa, nosoratany tao amin’ny bilaoginy Lasto Adri  ireto andalana ireto :
Taorian’ny fanambarana nataon’ny Tandrefana fa tsy misy hidiran’i Alemaina ny namonoana an'i Marwa, fa tranga maningana iny, Miandry amin'ny Tandrefana aho hanaisotra ao anatin’ny rakibolany ilay hevitra hoe : mpampihorohoro ireo Miozolomana ary mihevitra izy fa tsy misolotena ny Arabo na ny Miozolomana i Ben Laden sy ireo namany ohatra- fa amin’ny anarany manokana ny zavatra ataon’izy ireo.
Araka ny nolazain’ny ohabolana hoe: « Ny hopitaly no maneso ny asa soa». Samy meloka amin'ny “fihetsika te-hisetrasetra” daholo isika rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/08/127148/
 heloka feno fankahalana: http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=217708
 Ary raha vehivavy miaraka amin’ny vehivavy izy: http://egyptianchronicles.blogspot.com/2009/07/what-if-she-were-lesbian.html
 raha afaka natao mariky ny fihaonana indray i Marwa.: http://bikyamasr.wordpress.com/2009/07/05/bm-opinion-marwa-the-symbol-to-gather-people-together/